ဂျိုက်ဂွါး - ဝီကီပီးဒီးယား
ဂျိုက်ဂွါး (အင်္ဂလိပ်: Jaguar)
ဂျိုက်ဂွါးများ နေထိုင်ကျက်စားရာ ဒေသများ
လက်ရှိ (အနီရောင်)နှင့် ယခင်က (ပန်းရောင်)
Felis onca Linnaeus(လင်းနီးယပ်), 1758
ဂျိုက်ဂွါး ကျားသစ် (အင်္ဂလိပ်: Jaguar) သည် ကြောင်ကြီးမျိုး ပန်တယ်ရာ အွန်ကာ မျိုးစိတ် (Panthera onca) ဖြစ်၍ ကြောင်မျိုးရင်းဝင်ဖြစ်ပြီး တောင်အမေရိကနှင့် ဗဟိုအမေရိက ဒေသများတွင် နေထိုင်ကျက်စားသည့် သားရဲတိရစ္ဆာန် တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဂျိုက်ဂွါးသည် ကျားနှင့် ခြင်္သေ့တို့ ပြီးလျှင် တတိယမြောက် အကြီးဆုံးသော ကြောင်မျိုးရင်းဝင် သတ္တဝါဖြစ်သည်။ အနောက်ကမ္ဘာခြမ်းတွင် အကြီးဆုံးနှင့် အားအကောင်းဆုံး ကြောင်မျိုးရင်းဝင် သတ္တဝါလည်း ဖြစ်သည်။
ဂျိုက်ဂွါးတို့သည် ၎င်းတို့တွင် ရှိသော အစက်အပြောက်များကြောင့် ကျားသစ်နှင့် ပုံစံတူသည်။ သို့သော် ဂျိုက်ဂွါးများက ပို၍ သန်မာပြီး ခွန်အားလည်း ပိုကြီးကြကာ ၎င်းတို့၏ အမူအကျင့်မှာ ကျားနှင့် ပို၍ဆင်သည်။ ထို့ပြင် ဂျိုက်ဂွါး နှင့် ကျားသစ် တို့၏ သိသာထင်ရှားသော ကွဲပြားချက်မှာ ဂျိုက်ဂွါးများ၏ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရှိ အကွက်အပြောက်များ၏ အလယ်တွင် အနက်ရောင် အစက်အပြောက်များ ပါရှိပြီး ကျားသစ်များတွင်မူ မပါရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ရေနှင့်နီးသော နေရာတွင် နေထိုင်ရန် နှစ်သက်တတ်ကြပြီး ကျားကဲ့သို့ပင် ရေကူးရန် ခုံမင်လေ့ရှိကြသည်။ သားကောင်ရှာဖွေရာတွင် တစ်ကောင်တည်း ရှာဖွေလေ့ ရှိကြသည်။ ဂျိုက်ဂွါး၏ ကိုက်အားမှာ အခြား ကြောင်မျိုးနွယ် သတ္တဝါကြီးများနှင့် ယှဉ်လျှင် ပို၍ သန်မာသည်။ သူတို့၏ သန်မာသော ကိုက်အားကြောင့် ဂျိုက်ဂွါးတို့သည် အခွံမာသော တွားသွားသတ္တဝါများကိုပင် ပြတ်အောင် ကိုက်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ သားကောင်များကို တစ်မူထူးခြားစွာ သတ်ဖြတ် လေ့ ရှိကြသည်။ ၎င်းတို့သည် သားကောင်များကို နားရွက် နှစ်ဖက်ကြား ဦးခေါင်းခွံမှ စ၍ ဦးနှောက်ကို ပေါက်ထွက်သည့်တိုင်အောင် ကိုက်လေ့ရှိသည်။
၂ နေထိုင်ကျက်စားရာ ဒေသ
၃ နေထိုင်မှု ဘဝ
ဂျိုက်ဂွါးတို့တွင် အဝါရောင်နှင့် လိမ္မော်နှင့်အဝါ ရောယှက်နေသော အမွှေးအမျှင် များ ရှိကြပြီး အညိုနှင့် အနက်ရောင် အစက်အပြောက်များ ရှိကြသည်။ အနက်ရောင် တစ်ကိုယ်လုံးဖွေးတဲ့ ရှားရှားပါးပါး များကတော့ ကျားသစ်နက်ဟု အမည်ပေးရသည်။ ရွှေရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်၊ အဝါရင့်ရောင်ပေါ်မှာ အနက်ရောင်၊ အညိုရောင် အကွက်ကွက်တွေ့ရှိရင် ဂျိုက်ဂွားဖြစ်ပြီး အမြီးထိပ်ကလည်း မဲနေမှာ ဖြစ်သည်။
၎င်းတို့သည် ကြီးမား၍ အလေးချိန်စီးပြီး သန်မာသော ကြွက်သားများလည်း ရှိကြသည်။ တခါတရံတွင် လုံးဝမည်းနက်နေသော ဂျိုက်ဂွါးများရှိသော်လည်း အနီးကပ်ကြည့်ရှုပါက အစက်အပြောက်များကို မြင်တွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကို ကျားသစ်နက် ဟု ခေါ်လေ့ ရှိကြသည်။
အရွယ်အစားကတော့ သာမန်ကျားသစ်မျိုးများထက် ကြီးသည်။ ဦးခေါင်းထိပ်မှ အမြီးမပါ တစ်ကိုယ်လုံး အရှည်က ၄ ပေမှ ၆ ပေအထိ ရှိတတ်သည်။ အမ က အထီးများထက် ပိုငယ်ပါသည်။ အသက် ၃ နှစ်ဆိုရင် အရွယ်ရောက်ပြီလို့ သတ်မှတ် ရပြီ ဖြစ်သည်။ ယင်းအရွယ်မှာ အလေးချိန်အားဖြင့် ပေါင် ၂၂၀ ကျော်ပါသည်။ တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာမတူပါ။ ဥပမာ ဘရာဇီးမှာဆိုရင် ပေါင် ၃၀၀ လောက် အလေးချိန်စီးတဲ့ ဂျိုက်ဂွား ကျားသစ်များတောင် ရှိသည်။ အငယ်ဆုံးကတော့ ပေါင် ၁၁၀ ပဲ ဖြစ်သည်။ ဂျိုက်ဂွါးတို့သည် အမြင့်တက်ရာတွင် မကျွမ်းကျင်သော်လည်း ရေကူးကျွမ်းကျင်သော သတ္တဝါများ ဖြစ်ကြသည်။
ဂျိုက်ဂွါးတို့သည် တောင်အမေရိကနှင့် အမေရိက အလယ်ပိုင်းတို့တွင် ကျက်စားလေ့ ရှိကြသည်။ ၎င်းတို့သည် အများအားဖြင့် မိုးသစ်တောများတွင် နေလေ့ရှိသော်လည်း ဆဗားနားမြက်ခင်းပြင်များ၊ ညွှန်တောများနှင့် သဲကန္တာရဒေသများတွင်လည်း နေထိုင်လေ့ ရှိကြသည်။ ဂူထဲမှာ နေတာထက် သစ်ပင်ပေါ်မှာ ပိုနေတတ်တဲ့ တိရစ္ဆာန်များ ဖြစ်သည်။
ဂျိုက်ဂွါးတို့သည် အစားအသောက်ကို ရွေးချယ်စားသုံးလေ့ မရှိပဲ ရသမျှကို အကုန်စားလေ့ ရှိကြသည်။ နို့တိုက်သတ္တဝါ အကောင် အကြီးနှင့် အသေးများ၊ ငှက်များ၊ တွားသွားသတ္တဝါများ၊ ငါးများနှင့် ကျွဲနွားများကို စားလေ့ ရှိကြသည်။ သားကောင်ဖမ်းဆီးရာတွင် ၎င်းတို့သည် သားကောင်၏ အနီးသို့ တိတ်တဆိတ် ချဉ်းကပ်သွားပြီးမှ ရုတ်တရက် ခုန်အုပ်၍ ဖမ်းဆီးလေ့ရှိသည်။ ဂျိုက်ဂွါးတို့သည် သားကောင်တို့၏ ဦးခေါင်းခွံကို ကိုက်ခွဲ၍ သတ်ဖြတ်လေ့ ရှိကြသည်။ ထို့နောက် သားကောင်ကို လုံခြုံသော နေရာသို့ သယ်ဆောင်သွားပြီးမှ စားသုံးလေ့ရှိသည်။
တောင်အမေရိက၊ မြောက်အမေရိကမှာ တောပစ်ထွက်ရင်၊ လေ့လာရေးထွက်ရင် သစ်ပင်ကိုရှောင်ကြသည်။ ဂျိုက်ဂွားတွေက သစ်ပင် ကနေ ခုံအုပ်တာ အတော်ကျွမ်းတဲ့ ကျားသစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ လိပ်က အစ ဆင်အဆုံး အကောင်ကြီးကြီးတွေအထိ တိုက်ခိုက် စားသောက်နိုင် သူ ဖြစ်သည်။ အမဲလိုက်ရင်တောင် တစ်ကောင်တည်း လိုက်ပြီး ရန်သူတွေအဖွဲ့လိုက်ကိုလည်း ရင်ဆိုင်ရဲသူ ဖြစ်သည်။ ဇွဲလဲ အင်မတန်ကြီး ပါသည်။ လိပ်တစ်ကောင်ကို အမဲလိုက်ပြီဆိုရင် မြစ်လယ် ထိရောက်အောင်တောင် ရေကူးပြီး လိုက်ဖမ်းပါသည်။ ရေကူးလည်း အင်မတန်ကျွမ်းတဲ့အတွက် ရေသတ္တဝါများကိုလည်း အလွတ်မပေး သူ ဖြစ်သည်။ ရတဲ့ သားကောင်ကို ချက်ချင်းမစားပဲ ဘယ်ကောင်မှ မရှိတဲ့နေရာတွေမှာ စားသုံးပါသည်။
မြောက်အမေရိကတိုက်နှင့် တောင်အမေရိကတိုက်တို့တွင် တွေ့ရသော ဂျိုက်ဂွားခေါ်ကျားသစ်မျိုးတွင် ထိုတိုက်များရှိ ကြောင် အနွယ်ဝင် သားကောင်များတွင် အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ဂျိုက်ဂွား၏ ဦးခေါင်းမှာ သာမန်ကျားဦးခေါင်းနှင့် မတူဘဲ အတော်ပင်ကြီးမား၏။ ခြေထောက်များသည် တုတ်ခိုင် သန်မာ၏။ ကိုယ် အလျားမှာ အမြီးမပါဘဲ ၄ ပေမျှ ရှည် လျား၏။ အသွေးအရောင်မှာ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားခြားနားသော်လည်း အများအားဖြင့်မူ ဝါညစ်ညစ်အရောင်ပေါ်တွင် အနက်ရောင် အပြောက်အစက်များရှိသည်။ အမြီးဖျား၌ နက်နေသည်။ ဂျိုက်ဂွားကောင်သည် သစ်ပင်ပေါ်၌ အနေများပေသည်။ သားကောင်ကိုဖမ်းသောအခါ သစ်ပင်ပေါ်မှ ခုန်အပ်ဖမ်းတတ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ မြေပြင်သို့ဆင်း၍ နွား၊ မြင်း၊ သိုးတို့ကိုဖမ်းယူ စားသောက်တတ်သည်။ လူကိုတွေ့လျှင်လည်း လူကို စားသည်။ လိပ်များကိုလည်း မြစ်လယ်သို့ရောက်အောင်ပင် လိုက်လံ ဖမ်းယူစားသောက်တတ်သည်။ ဂျိုက်ဂွားကောင်ကို များသောအားဖြင့် တကောင်ချင်းတွေ့ရသည်။ ဂျိုက်ဂွားအမသည် တနှစ်လျှင် သား ၂ ကောင်မှ ၄ ကောင်အထိ မွေးသည်။ သားငယ်သည် မွေးပြီး ၃၅ ရက်အကြာတွင် မိခင်နောက်သို့ လိုက်နိုင်ပြီး မိခင်နဲ့အတူ အမဲလိုက်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ အသက် ၂ နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုရင် မိခင်မှ အလိုအလျောက်စွန့်ခွာသွားသည်။ ယင်းကစလို့ မိခင်ကူညီစရာ မလိုတော့ ပဲ ကိုယ်တိုင် အမဲလိုက်နိုင်ပြီမို့ ဖြစ်သည်။ အရွယ်ရောက်တာ ကတော့ အသက် ၃ နှစ်မှ စတာ ဖြစ်သည်။ သက်တမ်းအားဖြင့် ဂျိုက်ဂွားဟာ ပျမ်းမျှ ၁၃-၁၅ နှစ်လောက်ထိ ရှိသည်။ သို့ပေမယ့် တိရစ္ဆာန်ရုံတွေမှာ မွေးတဲ့ ဂျိုက်ဂွားကျတော့ အသက် ၂၂-၂၄ လောက်ထိ ရှိတာကို တွေ့ရသည်။ 
ဂျိုက်ဂွား၏ လှပတဲ့ အရောင်အသွေး အသွင်အပြင်ကြောင့် တောင် အမေရိက၊ မြောက်အမေရိက တိုက်က လူများ အမြတ်တနိုးထားသည်။ အရင်ကတော့ အမဲလိုက်သတ်ဖြတ်မှု များပြားခဲ့ပြီး ယခုတော့ တော်တော်လေးကို ထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ်ပါသည်။ Jaguar ကို အမှတ်တံဆိပ်လုပ်လို့ ကုန်စည်အမည် ပေးကြသည်။ ဥပမာ- အင်္ဂလန်မှာဆိုရင် Land Rover ထုတ်တဲ့ ကားတွေမှာ ဂျိုးဂွား တံဆိပ် ပါတတ်ပြီး Jaguar Land Rover လို့အမည်ပေးပါသည်။
ဂျိုက်ဂွားကျားသစ်အရေအတွက်များ ကျဆင်းသထက် ကျဆင်းလာပါပြီ။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်ဆီးမှုကြောင့်ရော၊ အစာရေစာ ရှားပါး မှုကြောင့်ရော၊ လူတို့ အမဲလိုက်မှုကြောင့်ရော၊ တောပြုန်းတီး မှုကြောင့်ရော ဂျိုက်ဂွားကို တောင်အမေရိကတောမှာ အတွေ့ရနည်းသွားပါပြီ။ တိရစ္ဆာန်ရုံတွေထဲမှာပဲ လက်သပ် မွေးရတဲ့ အခြေအနေ အထိ ရောက် လာသည်။ ဒါကြောင့် ဂျိုက်ဂွားကျားသစ်မျိုးများကို ကမ္ဘာ့တိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောင့်ရေး အဖွဲ့အနေနဲ့ အဖိုးတန် တိရစ္ဆာန်တစ်မျိုး အဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြောင်း သိရသည်။
↑ "Panthera onca" (2017). IUCN Red List of Threatened Species 2017. IUCN.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂျိုက်ဂွါး&oldid=709190" မှ ရယူရန်
၁၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၃၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၃၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။